KEDU KA ESI DEPRESS FOTO NA NHA CHỌRỌ - ESI MEE - 2019
Kedu ka esi depress foto n'ime usoro ihe omume Cesium
Ọ bụrụ na ị na-agafefe ihe oyiyi nke oke ibu n'elu Intanet, tinye ya na weebụsaịtị, maọbụ naanị enweghị oke disk diski iji chekwaa ya, mgbe ahụ, ị ​​ga-arụ usoro maka ịmechapụ onyinyo a site na iji usoro pụrụ iche. Nke a ga - enyere aka belata ibu ya, ma n'ihi ya - chekwaa okporo ụzọ ma ọ bụ ohere na diski ike.
Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi belata ihe dị arọ nke foto na usoro JPEG site na iji usoro a na-ewu ewu maka ịmepụta ihe oyiyi Cesium. Ngwa a abụghị naanị na-emepụta mkpokọta oyiyi dị elu, ma nwere ngwa ngwa dị iche iche maka usoro nhazi nke usoro a, nakwa dịka interface dị mma na nke na-enweghị isi.
Iji mebie usoro nke mpịkọta foto na usoro Cesium, nke mbụ, ịkwesịrị ịgbakwunye ihe oyiyi na ngwa a. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ kwekọrọ na n'elu panel.
Ugbu a anyị na-ahọrọ foto anyị chọrọ. Ekwesịrị ịdebe na usoro ihe omume ahụ na-akwado ọrụ na usoro JPG, JPEG, BMP, TIFF, TIF, PNG, PPM, XBM, XPM.
Ugbu a, ịkwesịrị ịhazigharị mkpado oyiyi ahụ, ọ bụ ezie na ịchọrọ ị nwere ike ịhapụ ntọala ndabara. Nke mbụ, maka mma, gbanwee onyinyo mbu nke onyinyo ahụ gwụrụ. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe osise dị na ntọala ugbu a ga-apụta mgbe nyochacha.
Ọzọ, anyị kwesịrị ịtọ ọkwa dị mma nke foto a gwụchara. Ọ bụrụ na ịtọ nrụrịta dị elu nke oke, ị nwere ike ịdọrọ àgwà oyiyi. Ma, ọ bụrụ na ị ghọtaghị nuances, ọ ka mma ịhapụ uru a bara uru. Usoro ihe omume ahụ ga-etinye ezigbo uru ya.
N'ikpeazụ, anyị kwesịrị ezipụta folda ebe a ga-eziga foto kachasị mma.
Mgbe ha setịpụrụ ntọala niile, ịnwere ike ịpịkọta foto ndị ahụ ahọpụtara na-enweghị ọdịda àgwà na nanị otu pịa na "Kọmpụ!" Bọtịnụ. Ọ bụrụ na a kachasị foto ọ bụla, usoro mkparịta ụka na-ewere ọnọdụ dịka ntabi anya, ma ọ bụrụ na ị na-eme mgbanwe nlele, nke a nwere ike iwe oge.
Mgbe ịmechara usoro a, windo ga-apụta, na-egosi njedebe nke usoro mkpakọ. Ọ na-egosiputa ọnụọgụ nke faịlụ ndị gbanwere nke ọma, na ọnụ ọgụgụ nke njehie, ọ bụrụ na ọ bụla. Ọ na-enyekwa ozi gbasara oge nke usoro ahụ na ịchekwa ohere nke faịlụ a gbanwere.
Hụkwa: mmemme maka mkpakọ foto
Dịka ị pụrụ ịhụ, na-eji usoro Cesium ahụ eme ihe, ọ dị mfe nchịkọta foto maka ozi nzipu ozi, ịdebe na Ịntanetị ma ọ bụ ịchekwa ya na ihe igwe ojii.
Chọpụta ma ọ bụrụ na Bluetooth dị na laptọọpụ
Ịwụnye ndọtị na Yandex Browser
Kedu ihe njikwa akaghachite na BIOS
Lelee nsogbu okwu na ntanetị
Ọ bụghị onye ọ bụla na-ekiri ihe oyiyi nwere ike ibipụta foto ruru eru. Imirikiti ngwa ndị a na-akwado ogo foto dị oke mma. Ma, enwere mmemme pụrụ iche nke nwere ike ibipụta foto ndị dị elu na-enweghị nhụpụ anya. GụKwuo
Esi tinyegharịa ihe nchọgharị Google Chrome
Esi mee Yandex na mmalite peeji nke Mozilla Firefox